Injineeriyadda - Page 5 - Geofumadas
AutoDesk waxay sii ballaarineysaa marti-qaad loogu talagalay muusigga cusub ee 3D oo keenaya nooca 2009, labadaba xalalka qorshaynta magaalada iyo dhismaha iyo shaqada madaniga ah. Bandhigani wuxuu noqon doonaa online, waana bilaash saacad ah ... iyo ugu fiican dhammaantood, Isbanishka !!! Tani waa inaad doorataa websaydhka in ...
Xisaabinta dhismaha, oo ay ku jiraan qorshooyinka
Area of ​​Calculus waa goob ay soo saartay Area De Calculus, Design and Construction S. de RL oo xarunteedu tahay magaalada Madrid. Sida magacu sheegayo, waa meel bannaan oo lagu xisaabiyo marka loo eego naqshad qaab dhismeedka internetka ah. Aan aragno tusaale: Waxaan rabaa in aan naqshado kabo gooni ah; Waxaan tagaa qaybta "Barnaamijka xisaabinta ...
Engineering, tabo cusub, Video
Iyada oo la adeegsanaayo "AutoDesk Labs" Waxaan bartay in maanta ay tahay maalintaas tan iyo markii 1988 loo dabaaldego sharafta warqadda PI, oo ka dhigaysa tiradaas nacaybka ah markaan waxbartay. Waxaan tixraacaynaa lambarka (3.14159 ...), oo taariikhda noqon doonta 14 laga bilaabo Maarso ilaa 1: 59 oo leh wareegyada 7, 254 oo kumanaan ilbidhiqsi ...
Codsiyada Google Earth ee Epanet
Epanet waa codsi ah oo aad u faa'iido badan ee falanqaynta Haydarooliga, waxaad samaysan karta network dhuun iyo kulmi falanqaynta network si ay gacanta u baahan xisaabinta badan oo samayn thay iyo falanqaynta tayada biyaha ku salaysan dheecaan masaafo (iyo wax kasta oo dareere). Waxa ugu fiican ee ku saabsan nidaamkaan waa in ...
AutoCAD iyo sanadaha 25
AutoCAD jeestay 25 sano, sida uu doonaynin gabar qaan ama nin ka mid ah uu xad. Blog Engineering kaxaystay lix baranay cashar taariikhda AutoCAD: AutoCAD 1.0 aan la wanaagsan u shaqeeyaan, si fiican la AutoCAD ugu caansan go'aansado si uu ula socdo AutoCAD DOS R9 Haddii nin galo iyo ...
Blog Ingenieria.com ayaa ku dhashay
Waxaan ku faraxsanahay inaan soo dhaweyno Blog Ingenieria.com, oo maanta lagu soo bandhigay shabakada Blogstica, waxaan rajeyneynaa inay dhamaystiri doonto mawduuca aan laga faa'iideysan barta Isbaanishka. Qeybaha ku yaal boggaan ujeeddadiisu tahay in laga daboolo waa: Codsiyada websaydhka dhismaha Barnaamijka Naqshadeynta CAD / CAM Engineering Engineering ...
Boggii hore Page 1 ... Page 3 Page 4 Page 5